Malezia: mitaky fitovian-jo ny Maleziana karana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Novambra 2007 9:05 GMT
Nisedra fitohanan’ny fiarakodia, fanapahan-dalana ary fikatonan’ny gara ny Mpitolon’ny karana Maleziana raha hamonjy ny alahadin’ny fitovian-jo tany Kuala Lumpur any Malaysia.
Nakaton’ny polisy ny lalana sy ny garan-dalamby roa manakaiky ny Vaomiera ambony Britanika na British High Commission hiomanany amin’ny filaharan’ny Hindu Rights Action Force (HINDRAF). Nampiasa baomba mandatsa-dranomaso sy tafondron-drano misy fangaro simika ry zareo hanaparitaka ny fivorivoriana, nataony izay hampizarazara ny mpitokona hiely any rehetra any. Teny ampizorana manaraka ny Jalang Ampang ny mpitokona no tafasaratsaraka, akaikin’ny Zohin’ny Batu izany (tempoly lehibe an’ny Haindoa ) ary manakaiky ny Kuala Lumpur City Centre (KLCC) [afovoan-tanàna], faritra manodidina ireo tilikambon’ny Petronas. Alohabe tamin’ny 7 ora sy sasany maraina no nanomboka nivory teo amin’ny KLCC ny mpitokona ary tsy nanandrana nandrava ny olona teo amin’ny tetezan’ny Zohin’ny Batu kosa ny polisy raha tsy tamin’ny 11 ora alina tany ho any.
Saripika Flickr ampiasain'i lastham
Nitantara ny fisedrana voalohany izany entona mandatsa-dranomaso izany i Jelas.info mpamaham-bolongana ao amin’ny Jalan Ampang:
I was near the front, and inexperienced with tear gas, so it caught me a little unawares. Oh by God it hurt.
It was all I could do to walk slowly away with the fleeing crowd. I wasnít sure if thereíd be FRU beating us from behind as we left.
Nanakaiky ny lohalaharana aho, ary noho izaho tsy mbola sendra izany entona mandatsa-dranomaso izany dia somary nanapoka ahy ihany ilay izy. Andriamanitro ô, mamely ihany ilay izy. Nieritreritra aho hoe ho sempotra. Zara raha naharaka tsimoramora ireo olona nandositra aho.
Tsy siora loatra aho hoe nisy FRU (herintafika) nikapoka anay ve namely anay avy ao aoriana tamin’izahay nandositra.
Noho ny fiparitahan’ny tangoron’olona moa dia sarotra ny naminavina ny isan’ny mpanao fihetsikatsehana nanatrika teo hany ka samy manana ny fanombanany azy ny mpitati-baovao. Ny BBC, izay nitantara hatreo ivelan’ny lapan’ny Vaomiera Ambony Britanika , nilaza fa mihoatra ny 5,000 ireo nifamotoana ireo. Ny Associated Press (via The Telegraph any India) kosa milaza ny isa ho mihoatra ny 10,000. Asia Times indray maminavina fa mihoatra ny 20,000 ireo nifamotoana, fa ny mpamoaka vaovao an’aterineto Malaysiakini indray no milaza fa 30,000 ny isan’ny tafavory.
Mitatitra ny The New Straits Times fa voampanga ny mpanao fihetsiketsehana 136. Mpitarika telo ao amin’ny HINDRAF tamin’ny alakamisy mialoha ny fihetsiketsehana no nosamborina ho manao fiokoana, ary dia noafahana tamin’ny alatsinainy teo rehefa nosintonina ny fitoriana.
Nolavina ny fangatahin’ny HINDRAF hanao filaharambe hankany amin’ny Vaomiera Ambony ka hametraka taratasy hiantso ny Britanika handoa US $4 000 000 000 000 ho onitry ny nitondrana ireo karana ireo hampiasaina tany Malaysia talohan’ny nahazoana ny fahaleovantena tamin’ny taona 1967. Nilaza ny mpanao fihetsiketsehana fa manavakavaka ny maro an’isa, indrindra ny Tamil ny lalàna eto Malaysia. Mihoatra ny 2.000.000 ny isan’ny karana eto Malaysia no matetika lavina ny fahazoan-dalana handraharaha, ny fahazoana tany ary ny fahafaha-mianatra eny amin’ny sekoly ambony noho ny fameran’isa izay manome vahana ny Maley, hoy ny mpanao fihetsiketsehana. Betsaka amin’ireo mpivorivory moa no mitondra saina misy ny Mpanjakavavy Elizabeth sy ny Mahatma Gandhi.
Saingy namaly kosa ny mpanao fihetsiketsehana fa nihaona ry zareo hanaitra ny Malaysian Indian Congress, izay manana an’Atoa YB. Dato Seri S. Samy Vellu ho filohany hatramin’ny filohan’ny antoko hatramin’ny taona 1979. Maro ireo mpanao fihetsiketsehana no naneho ny fahadisoam-panantenany manoloana ny fatoritorian’ny antoko mba hampakarana ny toerana misy ny karana ao Malaysia.
Ny mpamahana ny bolongana Colour Blind dia i Ronnie Liu moa nitantara fa mitaky ny hialan’Atoa Samy Vellu (anarana koa re izany ! tahaka ny hoe gasy !) ny mpanao fihetsiketsehana.
MIC Leader S Samy Vellu must step down now. That seems to be the common sentiment of the 30,000 protesters today. Every single Indian brother and sister I met today wanted Samy to go. So Mr Samy Vellu, have you heard their voices?
Tsy maintsy miala amin’izay ny mpitarika ny MIC Atoa S Samy Vellu izao. Izany no eritreritra iraisan’ny mpanao fihetsiketsehana mahatratra 30,000 androany. Izay rahalahy sy anabavy karana mifanena amiko dia mitaky ny handehanan’i Samy avokoa. Moa henonao izany feo izany Atoa Samy Vellu?
Disquiet [tsy mangina] mpamahambolongana sy filohan’ny National Human Rights Society na Fikambanam-pirenena miaro ny zon’olombelona , mampitaha ny asetrin’ny polisy amin’izao fotoana izao ny HINDRAF tamin’ny nataon’ny polisy ihany tamin’ny fihetsiketseham-panoheran’ny tanora UMNO i Malik Imtiaz Sarwar.
Tsy voatery hitovy hevitra amin’ny HINDRAF aho amin’ny fomba itondrany ny tolony. Nefa misy kosa anekeko ny tolony, mino aho fa tokony hiady ho an’ireo karana ambanian-jo sy voailikilika rehetra isika. Rehefa niteny izany ho an’ny mpifehy ny polisy sy ny governemanta ivantanan’ny fitokonana izy dia hanatsoa-kevitra fa mety hisy fahamarinana tokoa amin’izay lazain’ny HINDRAF.
Raha mifantoka amin’ny fomban’ny polisy hanaparitahana ny fivorivorian’ andian’olona ny mpamaham-bolongana amin’ny teny anglisy sy ny haino aman-jery iraisam-pirenena, ka ao anatin’izany ny AlJazeera sy ny BBC, ny gazety Maleziana tahaka ny The Star sy The New Straits Times kosa mampivoitra ny ratran’ny polisy noho ny fihetsiketsehana mahery setran’ny mpitokona.